Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 34)
Dib u eegista Lenovo K3 Note, guud ahaan Octa Core 64-bit iyo 2 Gb oo RAM ah oo keliya 135 Euros
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqeynta Lenovo K3 Note, guud ahaan 64-bit Octa Core, 2 Gb oo RAM ah iyo shaashad IPS FullHD ah oo aan ku iibsan karno kaliya 135 Euro.
Nokia waxay raadineysaa soo-saare caan iyo sumcad weyn ku leh adduunka oo dhan soo-celinta
Nokia waxay raadineysaa soo-saare soo-celin ah oo ka shaqeeya soo-saarka, taageerada, suuq-geynta iyo qaybinta soo-celinta.
9 milyan Sharaf 7 ayaa usbuuc gudihiis ah
Maamuusku wuxuu mar hore ku guuleystey inuu keydiyo wax ka badan 9 milyan oo cutub wax ka yar usbuuc. Jaantus muujinaya caafimaadka wanaagsan ee shirkadda
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Galaxy Note 5 ayaa la sifeeyay: 4GB oo RAM ah, 5 MP OIS kamaradda hore ...
Galaxy Note 5 ayaa la soo bandhigi doonaa bartamaha bisha Ogosto sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay. Taleefan la imaan doona nidaamka "so-in-one" SoC.
OnePlus wuxuu bilaabi lahaa OnePlus Two Mini
Xanta cusubi waxay timaaddaa toddobaadyo ka hor soo bandhigidda nooca cusub ee aaladda OnePlus Two. Sida ku xusan xantaas, OnePlus Two Mini wuxuu ahaan lahaa horumar.
Motorola Moto G 2015 waxaa lagu arkaa qaabab cusub
Jiilka soo socda ee Moto G wuxuu ku dhow yahay geeska. Moto G 2015 wuxuu umuuqday wax soojirin.
LG G4s, waa walaalka cusub ee qoyska LG's G4
LG waxay soo bandhigtay LG G4s, qofka bedelay LG G3s iyo walaal ka yar shirkada calanka u leh ee LG G4. Waxaan soo bandhigeynaa astaamaheeda ugu muhiimsan.
Soo bandhigida rasmiga ah ee Samsung Galaxy Note 5 ayaa horumarsan bartamihii bishii Ogosto
Sida muuqata soo bandhigga rasmiga ah ee Samsung Galaxy Note 5 sanadkan ayaa horeyba ficil ahaan loogu xaqiijin lahaa bartamaha Ogosto 2015.
Shirkadda Nexus ee Huawei ayaa billow ah, ayaa lagu yiri warbixinta
Sannadkan 2015 waxaan arki karnay laba qalab Nexus, mid ay soo saartay LG iyo tan kale oo ay soo saartay Huawei. Shirkadda Huawei ee Nexus ayaa la sheegay inay tahay mid bilow ah.
Xiaomi wuxuu soo xiganayaa saxaafadda July 16, Xiaomi Mi5?
Soo saaraha Shiinaha Xiaomi, ayaa u yeeray saxaafadda waaxda bisha soo socota ee July 16. Ma arki doonnaa maalintaas, Xiaomi Mi5 ee xigta?
Kuwaani waa kuwa soo saaray Samsung Galaxy A8 ee soo socota
Xubin cusub oo ka tirsan qoyska Galaxy ayaa soo baxaya, waa Samsung Galaxy A8. Phablet kaliya 5,9mm qaro weyn.
Google wuxuu jiidayaa adabtarada Ethernet si uu ugu isticmaalo Chromecast bilaa WiFi
Google ayaa hadda soo saartay adabtarad rasmi ah oo ka hortageysa isticmaalka WiFi-ka ee Chromecast. Wuxuu si toos ah ugu xiraa Router-ka iyo aaladda Chromecast.
Kawaran haddii aan Samsung Galaxy S6 ku shubnay Pepsi? Waxaan kuugu soo bandhigeynaa muuqaal ahaan
Miyaad u malaynaysaa in Samsung Galaxy S6 uu yahay mid aan biyuhu xirinayn maxaa dhacaya haddii aan Samsung Galaxy S6 ku dhex quusinno Pepsi? Waxaan ku tuseynaa waxa ka dhacaya fiidiyowga.
LG G4 oo lagu daray Drone, tani waa sida cajiibka leh kamaradda LG G4
Maanta waxaan ku tuseynaa fiidiyowgan cusub ee lagu duubay kamaradda LG G4 oo laga soo duubay diyaarad Drone ah.
LG G4 Beat ayaa markiisii ​​ugu horreysay shaashaddiisu tahay 5,2-inji iyo Snapdragon 615 chip
LG G4 Beat ama G4s waa sharad cusub oo soo saaraha Kuuriya ah si uu u keeno astaamo qiimo leh oo ku jira xirmo dhex-dhexaad ah.
OnePlus wuxuu bilaabi lahaa saddex nooc oo ah OnePlus Two
OnePlus waxaa laga yaabaa inuu qorsheynayo inuu soo bandhigo saddex nooc oo kala duwan oo ah OnePlus Two. Farqiga u dhexeeya iyaga? Xusuusta RAM
Imtixaanka xawaaraha Androidsis: LG G2 VS LG G4
Maanta waxaan wajaheynaa LG G2 VS LG G4 imtixaanka xawaaraha Androidsis. Ayaa ku guuleysan doona muranka labada walaal?
Hadda waxaad ku iibsan kartaa Meizu M2 Note wax ka yar 150 Euros
Miyaad ku iibsan kartaa Meizu M2 Note kaliya 145 euro oo ay ku jiraan kharashka dhoofinta? markaa qoraalkan ayaa ku xiiseynaya.
Imtixaanka xawaaraha Androidsis: Maanta LG G3 VS LG G4
Tijaabada xawaaraha ee aan ku wajaheyno LG G3 VS LG G4
Xiaomi Mi5 wuxuu ku kacayaa wax ka yar 350 euro
Astaamaha farsamada iyo qiimaha Xiaomi Mi5 waa la sifeeyey, calanka xiga ee soo saaraha Aasiya oo dhowaan la soo bandhigi doono.
Waxaan si fiican u tijaabinay LG G4, terminalka leh nashqadda ugu fiican suuqa hadda jira
Maanta Dib-u-eegidgan waxaan si dhammaystiran u tijaabineynaa LG G4 si aan kuu siinno ra'yigeenna ugu daacadsan ee aniga shakhsiyan aniga iigu fiican kan ugu sarreeya Android ee xilligan, labadaba naqshadeynta iyo farsamooyinka farsamada iyo shaqooyinka lagu daray.
Huawei P8 Lite, sababtoo ah tayada maahan inay khilaafto qiimaha
Waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqeyn ku saabsan Huawei P8 Lite, jawharadda cusub ee Huawei oo ay dooneyso inay ku xakameyso suuqa bartamaha. Ma guuleysan doontaa?
Sony waligeed ma iibin doonto qeybteeda casriga ah sida uu sheegay agaasimaheeda
Sony waligeed ma qorsheyneyso inay iibiso qeybteeda casriga ah, laakiin dhinaca kale, waxay sii wadi doontaa inay diiradda saarto sanadaha soo socda.
Waxaan horeyba u ogaanay wax walba oo ku saabsan Samsung Galaxy Note 5 ee soo socda
Xog badan oo ku saabsan Samsung Galaxy Note 5 ee soo socota, markan waxaan kuu sheegi doonnaa sida muuqaalkeeda dibeddu u ekaan doono iyo wax kale.
Sony waxay bilaabi kartaa noocyada cusub ee Xperia Z5 bisha Sebtember
Sony waxay bilaabi laheyd qalabkeeda cusub ee Xperia Z5 bisha Sebtember.
Xog badan ayaa ka soo baxeysa LG G Pro 3
Kuuriyaanka ayaa ka shaqeynaya nooc cusub oo ka mid ah laanta LG G Pro, waa jiilkii seddexaad waxaana loogu yeeri doonaa LG G Pro 3.
Waxaan tijaabinay sameecadaha dhageysiga ee wireless-ka ah ee loo yaqaan 'Olixar X2 Pro', oo ah sameecado tayo leh oo keliya 35,99 Euro
Maanta waxaan rabaa inaan kugula taliyo qaar ka mid ah sameecadaha dareenka leh ee leh Bluetooth Bluetooth 4.0 iyo NFC in ka yar 36 Euro. Magacaaga iyo tusaalahaaga Olixar X2 Pro waxaanan kuu haynaa iyada oo loo marayo MobileFun.es
Dhawaan waxaan ku arki doonnaa Casio Smartwatch suuqa adduunka
Sida laga soo xigtay Kazihuro Kashio, madaxweynaha Casio, sanadka soo socda ee 2016 waxaan yeelan doonnaa Casio Smartwatch kii ugu horreeyay, Casio smartwatch kii ugu horreeyay.
Telefoonada Shiinaha, faa iidooyinka iyo qasaaraha
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka ay mobilada Shiinaha leeyihiin iyo maxay yihiin waxyaabaha ay tahay inaad tixgeliso markaad iibsaneyso.
Nexus 5 2015 ayaa la xaqiijiyay; oo ha ka welwelin, in LG uu sameyn doono
Shaqaale LG ah oo aan magacooda la sheegin ayaa xaqiijiyay in soo saaraha loo xilsaari doono dhismaha cusub 5 Nexus 2015.
Batariyada ku jira saldhigayada Samsung waxay leeyihiin makarafoon qarsoon. Ah maya, taasi waa jab NFC ah!
Khiyaano cusub ayaa sheeganeysa in baytariyada Samsung ay kujiraan makarafoon qarsoon: waxba run ugama sii dheereyn karaan. Xaqiiqdii waxay isku daraan qalab NFC ah.
Dalool aad u weyn oo xagga amniga ah oo ka jira dhammaan xarumaha LG. Dhamaan moodooyinka iyo noocyada !!
God weyn oo ammaan ayaa laga ogaadey dhammaan terminaallada LG ee saameyn ku yeelan kara dhammaan noocyada iyo noocyada Taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada waddamada kala duwan ee Kuuriya.
Xiaomi waxay iibisaa 34,7 milyan oo taleefannada gacanta ah qeybtii hore ee sanadka 2015
Xiaomi waxay leedahay lambarro cajiib ah oo loogu talagalay iibinta taleefannada casriga ah qeybtii hore, waxayna gaareen 34,7 milyan. Muuqaal fadeexad leh
Xiaomi Mi5, Snapdragon 820 iyo 4 GB oo RAM ah?
Dillaac cusub oo ku saabsan calanka soo socda ee soo saaraha Shiinaha, Xiaomi Mi5 wuxuu muujinayaa qeexitaannada suurtagalka ah ee terminaalka.
Dhibaatooyinka batteriga ee Samsung Galaxy S4? Halkan waxaa ku yaal tilmaamo si aad wax yar u tuujiso
Maqaalkani waxaan ku siineynaa xoogaa xalal ah dhibaatooyinka batteriga ee Samsung Galaxy S4 iyo sidoo kale xulashada ugu fiican ee iibsiga.
Meizu MX5 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Calanka cusub, Meizu MX5, oo ka socda soo saaraha Shiinaha ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigay dadweynaha guud.
Huawei Honor 7, ayaa si rasmi ah u soo bandhigay calanka cusub ee Maamuusta
Sharafta ayaa ugu dambayntii si rasmi ah u soo bandhigtay Honor 7, oo ah Terminal-ka cusub ee soo saaraha Aasiya oo ku kacaya wax ka yar 300 euro.
Shaandheeyay sawirrada rasmiga ah ee bixiya Moto G 2015 cusub
Sawirada la bixinayo ee Motorola Moto G 2015 cusub ayaa umuuqda kuwo sifeeysan, oo imanaya iyada oo ujeedadu tahay sii wadista xukunka bartamaha.
Huawei wuxuu soo bandhigi karaa dhowr nooc oo sharaf ah 7
Hadda, sida loo soo bandhigayo Huawei Honor 7 ayaa soo socota, wararka xanta ah ee ku saabsan terminaalka cusub ee soo saaraha Aasiya ma joojinayo imaatinkiisa.
Oneplus 2 wuxuu yeelan doonaa shidma sawirka faraha
Teaser cusub oo la daabacay ayaa xaqiijineysa in midka cusub ee OnePlus 2, oo la soo bandhigi doono 27-ka Luulyo, uu dhexgeli doono dareeraha faraha
Tani waxay noqon kartaa sawirkii ugu horreeyay ee OnePlus 2
Sawir ayaa laga daadiyay waxa noqon karaya waxa loo malaynayo OnePlus 2.
Sharaf 4X, falanqaynta Huawei phablet cusub
Waxaan fulineynaa falanqeyn ku saabsan Honor 4X, halkaas oo aan ku muujineyno dhammaan sirta sharafta cusub ee 'Honor phablet', terminal leh qiime aan la loodin karin oo lacag ah
Kani waa Huawei MediaPad M2
Kiniin cusub oo casri ah ayaa ku biiraya buugga qalabka shirkadda Huawei. Waa Huawei MediaPad M2, kiniin 8-inji ah oo naqshad wanaagsan leh.
Sony Xperia Z3 Plus hadda waa laga iibsan karaa Yurub
Sony Xperia Z3 Plus horeyba waa looga iibsan karaa Yurub waxaana lagu iibsan karaa qiimo dhan 700 euro.
Kani waa Lenovo Vibe S1
Terminal cusub oo ka socda soosaaraha Shiinaha ee Lenovo ayaa la daadiyay iyadoo ay ugu wacan tahay shahaadada TENAA. Waa Lenovo Vibe S1.
Dib u eegida dhammaan noocyada rasmiga ah ee Android
Soo koobista astaamaha iyo muuqaalka mid kasta iyo nooc kasta oo ka mid ah noocyada 'Android' ee soo muuqday. Laga soo bilaabo beta ilaa Android M.
Soo saarida qalabka muusikada adoo adeegsanaya daabacadaha 3D
Hal codsi oo dheeri ah oo daabacayaasha 3d ah, kama badna ama ka yar, marka loo eego soo saarista qalabka muusikada.
Nooca C USB-ga ayaa noqon doona isku xiraha OnePlus 2 Heerka cusub ee caalamiga ah ee aragga?
Nooca isku xira USB-ka ayaa loo soo saaray inuu yahay heer ka jira teknolojiyadda cusub Hadda OnePlus 2 ayaa qaadan doona. Miyaynu arki doonnaa inta soo hartay ee soo socota tallaabada?
Xiaomi Mi 4i oo caalami ah ayaa laga heli karaa $ 238
Xiaomi Mi4i waxaa laga heli karaa caalami ahaan $ 238, qiimo aad u jaban oo la tixgelinayo qeexitaannadiisa waaweyn.
LG wuxuu ku dhawaaqay Band Play, oo ah taleefan casri ah oo diiradda lagu saaray tayada maqalka
LG Band Play waa aalad cusub oo ka timid soo saaraha Kuuriya iyadoo diirada la saarayo codka oo leh ku hadla 1W iyo LG QuadBeat 3 dhagaha.
Sony waxay sii daynaysaa Falanqeeyaha Horumariyaha ah ee 'Android M' ee loogu talagalay 17 qalabka Xperia
Sony waxay ku sii socotaa siyaasadeeda furfurnaanta si ay horumariyayaashu ugu heli karaan horusocodka Android M qalabka 17 Xperia.
Cubot R8, smartwatch-kii ugu horreeyay ee soo saaraha
Soo saaraha Shiinaha ayaa soo bandhigay waxa ugu horeeya smartwatch, Cubot R8.
Android Wear wuxuu leeyahay wajiyo cusub oo waardiye ah
Google ayaa soo saartay 17 waji oo cusub oo loogu talagalay Android Wear oo si toos ah loogala soo bixi karo Google Play.
Moto G 2015 sidan ma noqon doonaa?
Muuqaalka jiilka seddexaad ee taleefannada casriga ah ee Motorola, Moto G 2015, ayaa la helay oo ku faafay internetka.
Doogee Valencia Y 100 Pro, dhammaan macluumaadka ku saabsan terminalka cusub ee shirkadda Shiinaha ee la imaan doonta Android 5.1
Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan astaamaha farsamada iyo qiimaha Doogee Valencia Y 100 Pro cusub, ha ka waaban inaad gujiso qodobkaan maadaama aan kuu sheegi doono wax walba iyo wax walba.
Xiaomi Mi Band 2 oo leh shaashad taabasho ah
Jijin cusub oo xiaomi ah, Xiaomi Mi Band 2, ayaa la imaan doona shaashad taabasho taas oo sababi doonta in qiimaheeda uu kordho marka loo eego nooca koowaad
Huawei's smartwatch waa daahay
Smartwatch-kii ugu horreeyay ee soo saaraha Shiinaha ayaa dib u dhigaya bixitaankiisa. Huawei's smartwatch wuxuu imaan doonaa seddexaad seddexaad sanadkaan.
ZTE Nubia Z9S waxaa la soo bandhigi doonaa Juun 30
30-ka Juun ee soo socota waa maalinta loo calaamadeeyay jadwalka taariikhda soo-saareyaasha Shiinaha inay soo bandhigaan terminal-keeda xiga, ZTE Nubia Z9s.
Ugu dambeyntii OnePlus 2: Snapdragon asalka ah 810 iyo qiimaha ka sarreeya $ 320
Macluumaad dheeri ah iyo dillaac ayaa sii socda oo ku saabsan OnePlus One 2. Waxaa la sheegay inuu qaadi doono Snapdragon 810 oo asal ah qiimahiisuna wuxuu ka sara mari doonaa $ 320.
Samsung Galaxy S5 waxaa loo cusbooneysiin doonaa Android 5.1.1
Daawashada fiidiyowgii ugu dambeeyay ee ay soo dhigeen ragga ka socda Sammobile way cadahay in Samsung Galaxy S5 ay sidoo kale yeelan doonto xaddigeeda Android 5.1.
Tani waa ololaha cusub ee AT & T ee lagu dhiirrigelinayo Samsung Galaxy S6 Active
AT&T waxay daabacday ogeysiis madadaalo ah oo ay ku kafaala qaadayso Samsung Galaxy S6 Active. Miyuu ka sarreyn doonaa jilitaanka dhabta ah ee ragga 'AT & T'?
Telefoonada la iibiyo iyada oo aan lahayn wax xeedho leh Mustaqbalka taleefanka ma sidan ayuu noqonayaa?
Waa wax caadi ah in la helo noocyo iibiya boosteejooyinkooda iyada oo aan la helin fiilada korantada. Xiaomi ayaa ku biiri kara isbedelka. Miyay sidan noqon doontaa qof walba mustaqbalka?
Sony waxay diyaarineysaa cusbooneysiin loogu talagalay Xperia Z3 + kaas oo hagaajin doona dhibaatada kuleylka
Sony waxay durbaba ka shaqeyneysaa inay ku xalliso arrimaha kuleylka ee Sony Xperia Z3 + iyo Sony Xperia Z4 Tablet.
LG G4 Pro qeexitaankiisa ayaa xaday
Qalab cusub oo ka yimid soo saaraha Kuuriya ayaa ku jira iftiinka, waa LG G4 Pro soo socda. Kala duwanaansho la hagaajiyay oo ku saabsan calanka hadda jira.
OnePlus 2 wuxuu ku biiri doonaa jiilka labaad ee Snapdragon 810
OnePlus waxay si rasmi ah u shaacisay in midka soo socda ee OnePlus 2 uu ku biiri doono nooc ka mid ah kuwii hore loo sii wanaajiyay ee SoC ee aadka loo yaqaan, Snapdragon 810 v2.1.
Razer Forge TV, Console cusub oo Android ah ayaa yimaada Google Store
Razer Forge TV waa konsolleer cusub oo Android ah oo leh interface-ka TV-ga Android oo imanaya dukaanka qalabka Google, Dukaanka Google.
Shaqaale aan la aqoon oo ka tirsan Huawei UK ayaa xaqiijinaya inay sameyn doonaan Nexus soo socda
Shaqaale aan la aqoon oo ka tirsan shirkadda Huawei UK ayaa xaqiijiyay in Nexus soo socda ay soo saari doonto shirkadda Aasiya isla markaana uu imaan doono dhammaadka sanadka.
Iska jir !!, Dhibaato daran oo xagga amniga ah oo ka jirta xarumaha Samsung oo saameyn ku yeelan doona in ka badan 600 milyan oo qalab
Dhibaato daran oo xagga amniga ah oo ka jirta xarumaha Samsung oo saamayn ku yeelan doona in ka badan 600 milyan oo terminaal, oo ay ku jiraan Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge, Galaxy S5, S4 iyo S4 mini.
Soo qaado Ulefone Be Touch 2 oo leh $ 50 oo ka baxsan iibka Flash. (Unugyada xaddidan)
Maanta waxaan sharxeynaa sida loo helo Ulefone Be Touch 2 oo leh qiimo dhimis $ 50 taas oo ay ugu wacan tahay iibka Flash ee laga helo Everbuying.net.
Galaxy Tab E, oo ah kiniin hooseeya oo Samsung ka socda
Samsung ayaa si rasmi ah u sameysay kiniin cusub oo casri ah, Galaxy Tab E, 9,6 inji kaas oo ku dhaca qeybta hoose ee Android.
Dhibaatooyinka LG G4: shaashadda taabashada kama jawaabi doonto sidii la rabay
LG G4, midka u muuqday inuu yahay terminal leh dhammaan guuleysiga, wuxuu ku soo bandhigayaa dhibaatooyin shaashadda taabashada. Waxaan kuu sheegeynaa waxa dhacaya.
Xiaomi waxay samayn kartaa jibbaarro u gaar ah, marka ugu horreysa qaybta Redmi
Soo saaraha Shiinaha Xiaomi, wuxuu sameyn karaa Chips-keeda si uu ugu daro noocyada soo socda ee casriga casriga ah ee Redmi.
Oukitel A28 waa smartwatch aluminium fiican
Oukitel A28 waa smartwatch kii ugu horreeyay ee ka yimaada soo saaraha Shiinaha kaasoo imaan doona dhammaadka bisha.
Xiaomi Mi Band waxay iibisaa in kabadan 6 milyan oo unug oo adduunka ah
Xiaomi Mi Band waa mid kale oo ka mid ah guulaha ugu wanaagsan ee shirkadda adduunka oo dhan maadaama ay tahay jijin tayo sare leh oo tayo sare leh oo ah 20 euro.
Qeexitaanka Meizu M2 waa xaday
Meizu waa mid ka mid ah shirkadaha Shiinaha ee soo jiita dareenka ugu badan taleefannada casriga ah. Hadda Terminal cusub ayaa la dusiyay, Meizu M2.
OnePlus 11 waa fikrad xiiso leh
In kasta oo OnePlus 2 uusan imaan, haddana naqshadeeyaha aan caadiga ahayn wuxuu u oggolaanayaa mala-awaalkoodu inuu noqdo mid duurjoog ah iyadoo la abuurayo fikrad guurguura, sida ku jirta OnePlus 11
OnePlus 2 teaser iyo faahfaahin qaar
OnePlus waxay daabacday sawir ah soo-saaraha xiga ee soo-saaraha, OnePlus 2.
Nexus-ka Huawei wuxuu ku jiraa horumar
Waxaa la filayaa inta lagu guda jiro sanadkaan 2015, labo aaladood oo Nexus ah inay suuqa aadi doonaan, mid kamid ah, Huawei's Nexus, ayaa waxaa socda horumar.
Xanta ku saabsan soo socota Motorola DROID 2 4.200 mAh batari, Snapdragon 810?
Xanta ugu horeysa ee Motorola DROID 2 ee soo socota ayaa soo muuqaneysa. Terminal ku imaan kara 4.200 mAh baytari iyo Snapdragon 810.
Telefoonkee ayay isticmaaleyaashu haysteen ka hor Galaxy S6? Soo ogow!
Maanta waxaan keenaynaa labo sahan oo loo sameeyay cidda iibsatay ama ka fakartay iibsashada Galaxy S6. Terminal noocee ah ayey horey u lahaayeen? Kuwa Apple jooga miyaa la jirrabay oo lagu qancay?
Sida loo Flash 2 Roms ee Xiaomi Mi4
Tilmaamaha soo socda ee fiidiyowga wax ku oolka ah waxaan ku tusi doonaa talaabo talaabo ah sida loo dhajiyo 2 Roms ee Xiaomi Mi4.
Sida loo cusbooneysiiyo Xiaomi Mi4 ilaa 5.1 Lollipop
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo Android 4 Lollipop on your Xiaomi Mi5.1.1
Samsung waxay siisay shaashad isku laaban kiniiniyada
Sawirada qaar ayaa la daadiyay oo muujinaya aaladda Samsung, oo loo maleynayo kiniin, kaas oo u muuqda inuu haysto shaashad jilicsan
Huawei P8 Max, nooca ugu weyn ee Huawei P8 wuxuu imaan doonaa Juun 24
The Huawei P8 Max, terminal-ka ugu weyn ee illaa iyo hadda soo saaraha Shiinaha, ayaa suuqa soo gali doona 24-ka Juun.
HTC Mar Labaad Way Kordhinayaan: Isticmaal iPhone 6 si aad u Qaado Sawir Dhiirigelin ah oo ah HTC One M9 Daabac Dahab ah
HTC mar kale ayey isku soo uruurisaa iyadoo qaadaysa sawirka xayaysiinta ee 9-karat HTC # OneM24 iyadoo la adeegsanayo iPhone 6. Runtii, HTC?
Sida loo xidido Xiaomi Mi4 adigoon waayin damaanada alaabta rasmiga ah
Maanta waxaan ku tusineynaa sida loo xidido Xiaomi Mi4, u iftiimi CWM Recovery oo aad u rakibto Isbaanish Miui V6 Rom.
Falanqeyn qoto dheer oo ku saabsan Xiaomi Mi4 LTE, oo ah heer sare oo loogu talagalay kaliya 300 Euros
Falanqeyntan Xiaomi Mi4 waxaan ku tusineynaa dhammaan awoodaha iyo daciifnimada waxa aniga ii ah mid ka mid ah xulashooyinka iibsiga ugu fiican uguna xiisaha badan ee terminal cusub oo Android ah.
Samsung waxay daabacdaa ogeysiis cusub oo Samsung Galaxy S6 Edge ah
Samsung ayaa daabacday xayeysiis loogu talagalay Samsung galaxy S6 Edge oo loo yaqaan "S6 60 ilbiriqsi", halkaas oo ay ku muujineyso faa'iidooyinka calankeeda cusub
Xiaomi waxay iibisay in ka badan 13 milyan oo unug oo ka mid ah Redmi 2 iyo Redmi 2A
Shaki kuma jiro in soo saaraha Shiinaha Xiaomi uu ka mid yahay soo saarayaasha iibiya aaladaha ugu badan ee mobilada ilaa iyo sanadkaan.
Felblet 6.8-inji ah oo ka socda Lenovo ayaa u muuqda TENNA
Iyada oo leh nambarka nambarka PB1-770N, muuqaalkan cusub ee 'Lenovo phablet' wuxuu soo dhex maray hay'adda shahaado siinta ee Shiinaha oo u taagan cabbirka shaashadda
Red Pepper 9, oo ah taleefanka gacanta ee Shiinaha oo leh batari 5000 mAh ah
Waxaa jira taleefannada casriga ah ee Shiinaha soo jiita dareenkeenna, sida Beidou Red Pepper 9, oo ah terminaal Shiineys ah oo lagu daro batari 5000 mAh ah.
Saamiyada HTC waxay ku dhufteen qiimaha ugu hooseeya
Saamiyada HTC ayaa hoos ugu dhacay qiimehoodii ugu hooseeyay tan iyo markii lagu qoray Suuqa Kala iibsiga ee Taiwan. Sababta ayaa noqotay iibka saamiyada badan ee isla maalintaas.
Meizu M2 Note wuxuu gaarayaa 10 milyan oo boos celin ah
MEizu waxay hadda shaacisay in 10 milyan oo unugyo ah oo loo qoondeeyay Meizu M2 Note la gaaray
Xiaomi Redmi 2A waxay hoos u dhigeysaa qiimaha $ 80
Xiaomi waxay hoos u dhigeysaa qiimaha mid ka mid ah qalabkeeda ugu raqiisan illaa $ 80, waa kan la yaqaan ee Xiaomi Redmi 2A.
OnePlus One oo ah € 249 weligiis iyo isbahaysi la leh Dropbox
Shirkadda Shiinaha ee loo yaqaan 'OnePlus' ayaa ku dhawaaqday isbahaysi ay la leedahay shirkadda 'Dropbox' iyadoo ka faa'iideysanaysa ogeysiiska ah in terminalkeeda xiddiggu uu ku fadhiyo € 249 weligiis
Xiaomi Mi5 iyo MI5 Plus ayaa la imaan kara Snapdragon 820
Calaamadaha soo socda ee soo saaraha Shiinaha, Xiaomi Mi5 iyo Mi5 Plus, ayaa suuqa ku gaari kara hordhaca cusub ee Snapdragon 820.
Goor dhow ka imanaya mawduuca Samsung ee 'Pure Lollipop theme' ee loogu talagalay Galaxy S6
Galaxy S6 wuxuu si dhakhso leh u yeelan karaa mawduuc nadiif ah oo ah "Android Lollipop" si uu u siiyo dareemo wanaagsan adeegsadaha qaabeynta.
Kani waa Samsung Galaxy J7
Telefoon kale oo Samsung ah oo cusub ayaa maalmo ka hor la kashifay ka hor inta aan loo soo bandhigin dadweynaha. Waa Samsung Galaxy J7, oo ah meel dhexdhexaad ah.
Waa inuu leeyahay barnaamijyo loogu talagalay Android Wear: Maanta Mural Watchface
Mural Watchface waa mid ka mid ah barnaamijyada lagama maarmaanka u ah Android Wear oo aan awoodin oo aan ka maqnaan karin Smartwatch-kaaga
Shaandheeyay Samsung Galaxy S6 Edge Plus cusub
Samsung Galaxy S6 Edge Plus cusub ayaa sawiro laga helay. Dhexdooda ayaynu ku arki karnaa sida qalabku ugu kori doono ixtiraamka walaalkiis Edge.
Sony waxay ku dhawaaqeysaa soo saarista Android 5.1 dhammaan taxanaha Xperia Z laga bilaabo Julaay 1
1da Luulyo waa taariikhda ay Sony u dooratay soo dejinta Android 5.1 ee loogu talagalay dhammaan Xperia Z, oo ay ku jiraan Z, Z1, Z2 iyo Z3.
HTC One ME, kii ugu horreeyay ee la shaqeeya processor-ka cusub ee loo yaqaan 'Helio X10' ee MediaTek
Kuwa ka yimid Taiwan waxay soo bandhigeen terminaalkooda cusub, HTC One ME. Terminal noqon doona kii ugu horeeyay ee dhajiya processor-ka cusub ee Helio X10.
Samsung ayaa si qalad ah u soo bandhigtay Samsung Galaxy S6 Active
Samsung ayaa si qalad ah ugu daabacday degelkeeda dhowr sawir oo muujinaya Samsung Galaxy S6 Active, oo ay weheliso astaamaha farsamada.
Sawirro badan oo xaday Meizu MX5 ee soo socota
Calanka xiga ee soo saaraha Shiinaha, Meizu MX5, ayaa la soo bandhigi doonaa 30-ka Juun, inkasta oo aan loo tudhin siidaynta.
Sida laga soo xigtay shirkad gaar ah, iibinta Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge waxay gaari doontaa 50 milyan oo cutub dhamaadka sanadka
Cilmi-baarista Counterpoint waxay caddeysay in iibka Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge ay gaari doonaan 50 milyan oo cutub dhammaadka sanadka.
Meizu M2 Xusuusin, 8 koronto iyo 2 Gb oo RAM ah oo ka yar 150 euro
Meizu wuxuu baray dhaxalka Blue Charm. Meizu M2 Note horeyba waa xaqiiqo, terminal leh shaashad 5.5-inji ah iyo processor sideed-core ah
Adeegga qarsoodiga ah ee Ruushka wuxuu ku basaasaa Yotaphone
Mobiles-ka Yotaphone waxay ku dhasheen sidii sheeko cusub oo suuqa ku jirta, in kasta oo xaqiiqda ah inay noqon karaan wax basaasidda ah ee dawladda Ruushku aanay jeclayn.
Tag Heuer Carrera Wearable 01, saacadda qaaliga ah ee lagula tartamo Apple Watch
Maamulaha guud ee shirkada ayaa wareysiga kaga faallooday magaca uu smartwatch-ka uu wato ee loo yaqaan 'Android Wear' uu yeelan doono: Tag Heuer Carrera Wearable 01.
Nintendo's console-ka soo socda ayaa ku shaqeyn kara hoosta Android
Nintendo ee ciyaarta fiidiyowga ee soo socota ayaa ku socon kara nidaamka hawlgalka Android ee Google.
Samsung Galaxy Note 4 wuxuu heli doonaa Android 5.1 dhammaadka July
Samsung Galaxy Note 4 wuxuu heli doonaa Android 5.1 Lollipop dhamaadka bisha Luulyo, sidaa darteed waxaan filan karnaa xubnaha kale ee dhamaadka-sare ee Galaxy inay si dhakhso leh u helaan cusbooneysiinta.
Nexus 5 oo leh akhristaha faraha ayaa ka muuqda fiidiyow
Google I / O wuu dhammaaday laakiin wali wax badan ayuu siinayaa in laga hadlo sida muuqaalka fiidiyowga Nexus 5 oo leh akhristaha faraha.
Waa wakhti, midka OnePlus One ayaa iib ah
Waa waqtigii la iibsan lahaa OnePlusOne maadaama ay ku jirto iibka cajiibka ah wakhti xaddidan
[APK] Cajiib !! Soo dejiso oo rakib kamaradda cajiibka ah ee HTC One M9 oo leh dhammaan shaqooyinkeeda karti leh
Halkan waxaan kaaga tagayaa kamaradda xiisaha leh ee cajiibka leh ee HTC One M9 si aad ugu raaxeysato moodooyinka kale ee istiraatiijiyadaha Android ee aan ahayn HTC.
ASUS waxay ku dhawaaqeysaa ZenWatch 2, ZenFone Selfie iyo kiniiniga ZenPad
ASUS ayaa hadda ku dhawaaqday noocyo cusub oo ah alaabada Android oo ay ku jiraan ZenWatch 2, ZenFone Selfie iyo saddex ZenPads.
Android Wear wuxuu helayaa wajiga wajiga, laakiin hadda ma jiro wax calaamado ah oo ku saabsan taageerada macruufka
Waxaan kuu soo qaadaneynaa dhammaan wararka ku saabsan Android Wear 5.1 oo la soo bandhigay intii lagu jiray daabacaaddii ugu dambeysay ee Google I / O
Nexus 4 iyo Nexus 7 2012 lagama yaabo inay cusbooneysiiyaan Android M
Android M wuxuu noqon doonaa cusbooneysiinta cusub ee nidaamka qalliinka ee taleefannada gacanta, iyo Nexus 4 iyo Nexus 7 nooca 2012 ayaa noqon kara cusbooneysiin la'aan
HTC One M9 iyo One M9 + ayaa loo cusbooneysiin doonaa Android M
Soosaaraha Taiwan ayaa ahaa soo saaraha ugu horeeya ee shaaciya in HTC One M9 iyo One M9 + lagu cusbooneysiin doono Android M marka la helo.
OnePlus One wuxuu hoos ugu dhacaa qiimaha kahor imaatinka OnePlus Two
Qalabka cusub ee Shiinaha. OnePlus One, ayaa hoos u dhigi doona qiimaha kahor imaatinka dhow ee OnePlus Two.
Google CardBoard waa la cusbooneysiiyay
Kaadhadhka Google CardBoards waxay ahaayeen layaabkii weynaa ee daabacaadii ugu dambaysay ee Google I / O. Qalab ka samaysan kartoon oo ...
Kuwani waa dhammaan wararka ka imanaya Chromecast
Google waxay hadda nagala yaabisay daabacaadii ugu dambeysay ee Google I / O adoo soo bandhigaya taxane ah qaabab cusub oo loogu talagalay Chromecast.
Google I / O 2015: Maanta waxaa naloo soo bandhigi karaa labo ulo cusub oo Google ah, Chrome OS la qaadan karo iyo Chromecast 2
Maanta furitaanka Muhiimka ah ee Google I / O 2015 waxaan ku kulmi karnay laba Ulo cusub oo Google ah, gaar ahaan Chromecast 2 iyo HDMI Stick oo loo yaqaan Chromebit.
Sida loo habeeyo wajiga Moto 360 talaabo talaabo ah
Maanta waxaan ku tusayaa talaabo talaabo iyo muuqaal ah Sida loo qaabeeyo Moto 360 garaaca sawiradayada iyo qaabkeena iyo qaabkeena.
Tani waxay noqon kartaa Lenovo smart watch
Smartwatches-ka ayaa ku jira moodada, soosaaraashuna waxay rabaan inay iyagu lahaadaan, shirkada Shiinuhuna ma yaraan doonto.
Xiaomi Mi 5 wuxuu imaan lahaa Dayrta sanadkaan
Calanka xiga ee soo saaraha Shiinaha, Xiaomi Mi 5, ayaa ka imaan kara Dayrta waxaana lagu qalabeyn doonaa processor-ka Snapdragon 820.
Kani waa Samsung Galaxy J1 Pop
Samsung waxay dooneysaa inay daboosho dhammaan safafka ka jira suuqa. Hadda waxaad gacanta ku haysaa Galaxy J1 Pop, oo ah terminal-dhamaadka-hooseeya.
Halkan waxaan kaaga tagaynaa ka hor qof kasta oo ah nooca ugu dambeeyay uguna cusboonaysiinta ee Wear Mini Launcher si toos ah loogu soo dejisto apk iyo qalab lagu rakibo.
Laga bilaabo maanta, jijimadda Xiaomi Mi Band waxay la jaanqaadeysaa Google Fit si loo helo dhammaan xogta loo duubay dhaqdhaqaaq jireed maalinle ah
Terminalka xiga ee soo saaraha Shiinaha, OnePlus Two, waa la soo bandhigi karaa bisha Juun 1.
Microsoft waxay lashaqeeysaa LG, Sony iyo 18 shirkadood oo kale si ay horay ugu sii rakibaan xafiiska iyo Skype kiniinada Android
Iyo 18 shirkadood oo soosaarayaal ah oo shuraako la ah Microsoft si ay horay ugu rakibaan Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Skydrive, iyo Skype kiniinadooda Android.
Kani waa Galaxy S6 Edge Iron Man Edition
Wax badan ayaan ka hadalnay daabicadan kooban laakiin ilaa maanta ma aanan awoodin inaan aragno waxa cusub ee Galaxy S6 Edge Iron Man Edition runtii u eg yahay.
Google ma sii deyn doonto wax kiniin ah Nexus sannadkan
Daawadeyaasha Mountain View ma hayaan ujeedo ah inay sii daayaan wax kiniin ah Nexus inta ka harsan sanadka. Xilligii kiniinku ma dhammaaday?
Doogee F3, sawirradii ugu horreeyay ee dhabta ah
Waxaan soo bandhigeynaa sawirradii ugu horreeyay ee dhabta ah iyo qeexitaannada farsamo ee waxa noqon lahaa Doogee F3, astaanta cusub ee shirkadda Shiinaha.
Sony Xperia Z3 + waa rasmi: Snapdragon 810 chip, 5.2 ″ 1080p screen iyo biyuhu
Xperia Z4 waxaa lagu soo bandhigay bil ka hor Japan, oo loogu talagalay waddankaas magacaas iyo Xperia Z3 + suuqgeynta caalamiga ah
Sannadkan Google waxay soo bandhigi doontaa 2 Terminal cusub oo Nexus ah, Smartphone iyo Phablet
Horey waxaa loogu xamanayaa xoog in Google ay diyaarin laheyd 2 Terminal cusub oo Nexus ah si ay u soo bandhigaan sanadkan 2015.
Lagu sifeeyay wejiga hore ee Meizu MX5 iyo MX5 Pro
Shirkadaha Shiinaha ee xiga, Meizu MX5 iyo MX5 PRO ayaa imaan kara inta lagu jiro bisha soo socota ee July.
Kani waa casriga casriga ah ee 'Smartphone' aan lahayn shaashadda shaashadda
Soo saaraha Jabbaan ayaa sidoo kale ku biiraya qaabka loo sameynayo taleefannada casriga ah iyagoon dhinacna ka heysan shaashadda isla markaana sidaas ku sameyn doona Sony Levander.
OnePlus Two ayaa la sii dayn karaa July 16
Terminalka xiga ee OnePlus Two ayaa soo bixi kara inta lagu jiro bisha Luulyo, gaar ahaan July 16.
Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge Iron Man Edition waa rasmi
Samsung ayaa si rasmi ah u sameysay labada taleefan ee casriga ah ee soo socda. Waa Galaxy S6 iyo S6 Edge Iron Man Edition oo imaan doona dhamaadka bisha.
Diyaarad dhan oo leh kamarad HD kaliya 79 euro oo ay ku jiraan kharashka dhoofinta
Haddii aad rabto inaad iibsato Drone raqiis ah, hubaal ma rumaysan kartid in this Quad Copter UltraFly xiisaha leh annagaa iska leh oo keliya 79 Euros oo ay ku jiraan kharashka dhoofinta.
Sida loo rakibo barnaamijyada LG G4 LG G2
Hoos waxaan ku siineynaa dhammaan codsiyada LG G4 ee lagu rakibayo LG G2 iyo sidoo kale habka saxda ah ee loo rakibo iyo shuruudaha la buuxinayo.
[APK] Soo degso barnaamijyada Samsung Galaxy S6 si aad ugu rakibtid Samsung-kaaga
Maanta waxaan idinla wadaageynaa dhammaantiin codsiyada Samsung Galaxy S6 si loogu rakibo moodello kale oo ka mid ah telefannada Samsung.
Sida loo cusbooneysiiyo Xperia Z-kaaga Android 5.0.2 Lollipop adoo adeegsanaya Flashtool
Waxaan ku tusineynaa sida loo cusbooneysiiyo Xperia Z talaabo talaabo ah Android 5.0.2 Lollipop iyadoo la adeegsanayo Flashtool
Waa maxay sababta aysan wararka xanta ah ee bilowga hore ee Galaxy Note 5 micno u samaynaynin?
Waxaa jiray warar xan ah oo xoog leh oo ku saabsan horumarka daahfurka Galaxy Note 5. Maanta waxaan sharaxeynaa sababaha uusan sidaas u aheyn, waligiisna ma noqon doono sidaas.
Samsung iyo Sherpa waxay ku dhawaaqeen Heshiis ay ku darayaan Sherpa Next oo ku jira Galaxy S6 iyo S6 Edge
Samsung iyo Sherpa waxay gaareen heshiis ah in Sherpa Next horey loogu sii dhejiyo Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge
Samsung waxay iibisay 10 milyan oo Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge ah, wax ka yar kuwii ka horreeyay
Sida laga soo xigtay warbaahinta Kuuriya, iibinta Galaxy S6 iyo S6 Edge uma socdaan sidii la filayay: 10 milyan oo unug ayaa lagu iibiyay 40 maalmood.
Sony Xperia Z waxaa loo cusbooneysiiyey Android 5.0 Lollipop
Android 5.0 Lollipop wuu daahay laakiin ugu yaraan wuu yimaadaa, Sony Xperia Z.
LG waxay diyaarinaysaa calan cusub bartamaha sanadkan
LG wuxuu soo bandhigi karaa calan cusub qeybtii labaad ee sanadka 2015. Ma noqon doonaa LG G Pro 3?
Qalabaynta Android Wear 5.1.1 waxay ku bilaabmaysaa astaamo badan oo cusub
Android Wear 5.1.1 waa cusbooneysiin weyn oo loogu talagalay milkiilayaasha smarwatch oo leh nidaamkan hawlgalka maadaama ay ku jiraan horumarin badan
LG wuxuu ku dhawaaqay G4 Stylus iyo G4c, waa laba nooc oo la awoodi karo oo ah G4
LG wuxuu ku dhawaaqay imaatinka laba qalab oo cusub: G4 Stylus iyo G4c. Mid qaab muuqaal ah midna qaab "mini" ah.
HTC One M10 ayaa imaan laheyd sanadkan
HTC One M10 ee soo socota ayaa ku dhici karta suuqa ka hor dhammaadka sanadka.
Sida loo damiyo codka santuuqa Galaxy S6
Waxaan ku tusineynaa sida loo demiyo dhawaqa shaashada ee kamaradda Galaxy S6, haddii aad ROOT leedahay iyo haddii kaleba
LG G4 ayaa bilaabi doonta iibinta toddobaadkan
LG wuxuu kubilaabmaa bilaabida aduunka ee G4 asaga oo ugu qaybinaayo dhowr gobol oo muhiim ah si markaas uu ula gaaro kuwa kale
4 telefoonada Android oo qiimahoodu ka yaraa 200 oo euro
Miyaad ka fikireysaa inaad iibsato mobilo cusub? Hagaag, fiiri taleefannadan Android ee ku kacaya wax ka yar 200 euro.
Sony sidoo kale waxaa ka go'an telefoonnada gacanta oo aan lahayn shaashad shaashadda ah
Isbedelka cusub ee casriga ah ayaa noqon doona inuusan shaashadda ku yeelan shaashadda dhinaca. Sony waxay ku sharadami doontaa mobilada noocan ah Sony Lavender-ka.
Xiaomi Redmi Xusuusin 2 Pro oo leh dheecaan jir bir ah
Mar labaad mahadsanid daadinta waxaan ognahay inay jiri doonaan nooc ka mid ah Xiaomi Redmi Note 2 Pro oo leh jir bir ah.
Jiilka saddexaad Moto G 2015 wuxuu muujinayaa astaamaha nolosha
Moto G 2015 ee soo socota ayaa ku dhow geeska sababtoo ah muuqaalkii ugu dambeeyay ee dukaanka internetka ee caanka ah.
Qiimaha iyo tilmaamaha farsamo ee Nexus 5 2015 cusub ayaa la sifeeyey
Ugu dambeyntii sifeyn hufan oo aan ku ogaanayno qiimaha iyo tilmaamaha farsamo ee Nexus 5 2015 cusub
Muxuu Nexus 2015 u baahan yahay inuu ahaado wixii markii hore ahaa?
Xanta ayaa soo jeedinaysa inay jiri doonaan laba terminaal Google sannadkan, laakiin muxuu Nexus 2015 u baahan yahay inuu ahaado sidii hore?
Moto E 2015 wuxuu bilaabmayaa inuu helo Android 5.1 Lollipop
Waxaan ku taxnaa dhammaan wararka iyo cilladaha cayayaanka ee Android 5.1 ee loo yaqaan 'Moto E 2015' oo horeyba u gaadhay isticmaalayaal badan
Aaladaha mustaqbalka: 1kii qofba 20 ayaa yeelan doona smartwatch sanadka 2020
Suuqa smartwatch wuxuu ku dhufan doonaa 7 5 sano gudahood. Waxaa lagu qiyaasaa in 20kii isticmaale midkood uu soo iibsan doono mid ka mid ah aaladahaas.
Android 5.1 Lollipop loogu talagalay Galaxy S6 iyo S6 Edge ayaa imanaya bisha soo socota
Bisha Juun waxay umuuqataa inay tahay tii loo doortay imaatinka cusboonaysiinta Android 5.1 Lollipop ee Galaxy S6 iyo Galaxy S6 Edge
Sawir ah Samsung Galaxy S6 Firfircoon oo firidhsan
Samsung's Galaxy S6 Active waa terminal u ololeeya adkeysiga iyo iska caabinta waxaana loo diyaariyey dhammaan noocyada jawiga
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan jiilka labaad ee Moto 360
Waxaan ka badneyn sanad tan iyo markii la sii daayay jiilkii ugu horeeyay ee Moto 360. Hadda waxaan helnay faahfaahin ku saabsan waxa uu noqon doono jiilkiisa labaad.
Galaxy S6 iyo S6 Edge waa la cusbooneysiiyay si loo saxo khaladaadka
Terminal-yada cusub ee xiddigo, Galaxy S6 iyo S6 Edge, waxay helayaan cusbooneysi cusub oo lagu saxo khaladaadka.
Samsung ma iibin karto Galaxy S6 iyo S6 Edge Japan gudaheeda, xitaa ma saari karto astaanta
Warbixinadii iibka ee ugu dambeeyay waxay xaqiijinayaan in iibka Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge ee Japan uusan u socon sidii la filayay.
Huawei Mate 8, shaashadda 2K, Kirin 930 iyo 20 megapixel camera?
Huawei Mate 8, oo ah calanka soo socda ee soosaaraha Aasiya ee kala duwan ee Mate, qaar ka mid ah astaamaha farsamo ayaa la dusiyay
Sony waxay sii deyneysaa fiidiyoow yar oo loo yaqaan 'Xperia Z4 Tablet'
Kiniiniga 'Xperia Z4 Tablet' waa sharadka cusub ee Sony ee suuqkan kiniiniga ah kaas oo lagula kulmayo tartanka alaab heer sare ah
Bixiyeyaasha Meizu MX5 waxay muujinayaan shaashad aan lahayn dhinac dhinac ah
Sannadkii hore 2014, soo saaraha Aasiya wuxuu la qaatay dib u eegis aad u wanaagsan labada Meizu MX4 iyo Meizu ...
LG Hada Waxay Tiri G4 Waxay Bixin Doontaa Lacag Deg Deg Ah 2.0 Taageero
LG wuxuu ilaaway nidaam lacag bixin deg deg ah markii G4 la shaaciyay inuu hada sheegayo inuu bixinayo Quick Charge 2.0 waafaqsan
Cusboonaysiinta 'Android Lollipop' ee jidka loo maro Moto X (2013)
Toddobaadyada soo socda hawlgalinta loo yaqaan 'Android Lollipop' ee Moto X (2013) ayaa bilaabmi doonta. Nooc ay filayaan dadka isticmaala taleefankan weyn
Waa maxay waxyaabaha ay tahay in xisaabta lagu daro marka la dooranayo shaashadda casriga ah?
Markaan doorano shaashadda mobilada waxaa jira dhowr arrimood oo xisaabta lagu darsado. Maanta waxaan sameyneynaa falanqeyn ku saabsan dhammaan waxyaabaha saameynta ku leh.
Sawirro cusub oo xaday Huawei Mate 8
Qeybta soo socota ee soo saaraha Shiinaha, Huawei Mate 8 ma uusan awoodin inuu ka baxsado daadinta cusub.
Huawei iyo LG waxay ahaan lahaayeen soosaarayaasha Nexus soo socda ee soo bixi doona sannadkan
Google ayaa sii deyn doonta markii ugu horreysay taariikhda, laba Nexus terminal sanadkan. Midka koowaad waxaa soo saari doona LG kan labaadna Huawei.
Xiaomi Mi 5 ayaa ku dari kara 820nm Snapdragon 14
Calanka xiga ee soo saaraha Shiinaha wuxuu ku darayaa processor illaa iyo hadda aanan arag, 820-nanometer Snapdragon 14.
OnePlus wuxuu cusbooneysiin doonaa OnePlus One si uu u xaliyo arrimaha taabashada
Inta aan sugeyno OnePlus Two, shirkaddu waxay xaqiijisay inay hagaajin doonto arrimaha shaashadda taabashada ee OnePlus One.
Moto X 2015 wuxuu duubi lahaa 240 fps
Jiilka soo socda ee casriga ah ee Motorola, Moto X 2015 wuxuu awood u yeelan doonaa dhaqdhaqaaq gaabis ah, gaar ahaan 240 fps.
Samsung Galaxy Note 5 wuxuu yeelan doonaa qaab 4K ah, miyaad ku sharadaysaa xaqiiqda dhabta ah?
Samsung waxay dooneysaa inay si adag u sharaddo tikniyoolajiyadda VR. Sidaa darteed, waxay soo bandhigi kartaa nooc ka mid ah Samsung Galaxy Note 5 oo leh shaashad 4K ah.
Qiimaha LG G4 waa kan ugu jaban noocyada ugu sarreeya ee Android
Waxaan horey u ogaanay qiimaha LG G4 inuu noqon doono midka ugu raqiisan dhamaan noocyada sare ee Android. Qiimaha calanka cusub waa 649 euro.
ZTE Q302C boosteejo ah oo leh LTE wax ka yar 100 euro
ZTE Q302C waa aaladda ugu horeysa ee kujirta processor-ka Snapdragon 210. Terminal 5 "ah oo leh LTE iskuxirkiisu wuxuu kudhowaan doonaa 100 doolar.
Nexus Huawei wuxuu yeelan karaa shaashad 5,7-inch ah, 2K xal ah iyo Snapdragon 810
Nexus-ka soo socda ee Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa shaashad dhererkeedu yahay 5,7 "inch oo leh xallinta 2K iyo processor-ka Snapdragon 810.
Sida loo rogo Android-kaaga HTC One M9
Tutorial halka aan ku tuso sida loogu rogo Android-kaaga HTC One M9.
Ciyaartii ugu horreysay ee fiidiyow ee Nintendo loogu talagalay taleefannada casriga ah ayaa imaan doonta sannadkan iyadoo 5 cinwaanna diyaar u yihiin 2017
Nintendo waxay soo saari doontaa taleefankeedii ugu horreeyay dhammaadka 2015 iyo 5 ciyaar fiidiyow ah oo laga sameeyay xoq qalabkan 0
Motorola wuxuu ku bilaabmayaa soo dejinta Android 5.1 ee jiilka labaad ee Moto X
Motorola ayaa hadda ku dhawaaqday soo dejinta Android 5.1 jiilka labaad ee Moto X iyadoo ay jiraan warar aan ka aheyn tilmaam
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Android 5.0.2 ayaa burburinaysa qaar ka mid ah Nexus 9
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Android 5.0.2 ayaa burburinaysa qaar ka mid ah Nexus 9 sida ay uga faalloodeen isticmaaleyaal kala duwan internetka.
Macluumaad dheeri ah ayaa ka dusay Galaxy Note 5 ee soo socda
Samsung's phablet-ka soo socda, ee Galaxy Note 5, wuu ka yaraan lahaa noocyada hadda jira wuxuuna soo bandhigayaa processor Snapdragon 808.
Sony Xperia Z4 Compact ee Maajo 13?
Xanta cusubi waxay soo jeedineysaa in Sony Xperia Z4 Compact la soo bandhigi doono 13-ka Maajo. Ma noqon doonaa nooca Jabbaan?
Maamulaha OnePlus wuxuu xaqiijinayaa qaar ka mid ah astaamaha iyo qiimaha OnePlus Two
Maamulaha OnePlus ayaa shaaca ka qaaday qiimaha iyo qaar ka mid ah astaamaha farsamo ee OnePlus Two.
Xanta cusub ee ku saabsan qeexitaanka Samsung Galaxy Note 5
Waxaan dooneynay inaan soo aruurino dhammaan wararka xanta ah ee ka socda internetka si aan u helno fikrad ah waxa qeexitaanka Samsung Galaxy Note 5 uu noqon doono
Sida taleefanka gacantu u shaqeeyo
Haddii aad had iyo jeer rabtay inaad fahamto sida taleefanka gacantu u shaqeeyo, maanta waxaannu kuu sharxi doonnaa aasaaska is-gaadhsiinta boosteejooyinkan.
ZTE Nubia Z9 hadda waa rasmi: 5,2 screen FHD shaashad, Snapdragon 810 iyo kamarad 16MP
Muuqaalka ZTE Nubia Z9 oo leh shaashad 5,2 "ah, Snapdragon 810 iyo kamarad 16MP ah ayaa hadda rasmi ah, oo waliba u taagan baalasha ugu dhow ee aan la arki karin"
Sony ayaa ku dhawaaqday Xperia C4, oo ah meel ku habboon qaadashada sawir-qaadashada
Sony ayaa maanta shaacisay, Terminal cusub oo ku biiraya noocyada kala duwan ee qalabka shirkadda Japan. Tani waa Xperia C4.
Xiaomi iyo Qualcomm waxay qaabeeyaan nooc cusub oo ah Snapdragon 810
Shirkadda Qualcomm ayaa dib u eegis ku sameysay processor-keeda nooca cusub ee loo yaqaan Snapdragon 810 v2.1 ayaa aad uga xasiloon kuwii hore.
Bishii Abriil ee ugu xumeyd iibka HTC ee sanadihii ugu dambeeyay 6
HTC waxay soo bandhigtay waraaqo isku dheelitiran oo aad u xun oo muujinaya xaalad xumo shirkadda.
Tilmaamaha suurtagalka ah ee Moto X 2015 waa la sifeeyaa: 5,2 .808 shaashadda QHD, Snapdragon 4 iyo XNUMXGB oo RAM ah
Motorola waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto 2015 Moto X oo leh shaashadda QuadHD, 4GB RAM iyo Snapdragon 808 bisha Ogosto ama Sebtember
Kaamirada Galaxy S6 ayaa horumarin karta mahadnaqa Android 5.1.1
Kaamirada Galaxy S6 way fiicnaaneysaa iyada oo ay ugu mahadcelinayaan casriyadii ugu dambeysay ee Android 5.1.1 Lollipop.
Xiaomi waxay ku soo bandhigeysaa Shiinaha Mi Note Pro shaashadda QHD iyo 4GB RAM
Xiaomi Mi Note Pro ayaa laga bilaabay Shiinaha wuxuuna la yimid QHD shaashadda xalka iyo xalka dhibaatooyinka heerkulka ee Snapdragon 810 chip
Ka eeg dhammaan wararka ku saabsan Android Wear 5.1.1 muuqaal ahaan
Muddo aan fogeyn ayaa cusbooneysiin cusub oo ku saabsan nidaamka qalliinka ee dharka la gashado laga keenay Google yimid. Hadda waxaan arki karnaa wararka ku saabsan Android Wear 5.1.1 muuqaal ahaan
Qiimaha ZTE Nubia Z9 horey ayaa loo ogaa
ZTE waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto terminalkeeda xiga bisha May 6, taas oo qiimaha ZTE Nubia Z9 horeyba loo ogaa.
Samsung Spain waxay xaqiijineysaa in Galaxy Note 2 uu heli doono Android 5.0
Samsung Spain ayaa xaqiijisay in Samsung Galaxy Note 2 lagu cusbooneysiin doono Android 5.0 L goor dhow. Cajiib ah, iyadoo la tixgelinayo inay suuqa ku jirtay muddo saddex sano ah.
Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge Iron Man Edition noocyo cusub bisha Juun
The Galaxy S6 Iron Man Edition iyo S6 Edge Iron Man Edition waa laba boosteejo oo leh abaalmarin superhero caan ah. Qalabkan ayaa imaan doona bisha Juun.
New Galaxy Tab S2 oo lagu dhawaaqi doono bisha Juun
Jiilka xiga ee noocyada kala duwan ee Samsung, Galaxy Tab S2, ayaa lagu dhawaaqi doonaa bisha soo socota.
Faahfaahinta la sifeeyay ee Xiaomi Mi5 iyo Mi5 Plus
Mar labaad daadadku waxay noo keenayaan qeexitaannada soo socda ee shirkadda Shiinaha, Xiaomi Mi5 iyo nooca loo yaqaan 'Plus'.
LG G4 Compact, waa nooc loogu talagalay bartamaha
LG G4 Compact wuxuu noqon doonaa nooca loo yaqaan 'flagship' ee soo saaraha Koonfurta Kuuriya ee dhexdhexaadka ah ee Android.
Sida loo furo loona rujiyo Samsung Galaxy Nexus
Haddii aad raadineyso sida loo rujiyo ama loo furo Samsung Galaxy Nexus, fiiro gaar ah u yeelo dhammaan talooyinka ku jira isku-duwidda aan maanta kuu keenayno.
Galaxy Note 5, maxaad u malayn fikradan?
Magaca mashruuca sharafta leh ayaa qarinaya waxa noqon doona Samsung Galaxy Note ee soo socda 5. Fikrad ayaa ku socota shabakadda sida terminalkan cusub u noqon karo
Lenovo A3900, waa qiimo jaban shirkadda Shiinaha
Shirkadda Shiinaha ayaa gacmaheeda ku heysa terminal qiimo jaban, Lenovo A3900, taleefan gacmeed qiimo jaban leh oo leh qeexid iyo qiimo labadaba.
Xiaomi Mi5 iyo Mi5 Plus ayaa imaan kara bisha July
Xiaomi Mi5 cusub iyo Mi5 Plus ayaa lagu faafiyey shabakada caanka ah ee bulshada ee Shiinaha.
Lambarka 1 S6i, waa mid ka mid ah qalabka Shiinaha ee Galaxy S6
Lambarka 1 S6i waa isku xirnaanta Shiinaha ee Galaxy S6. Midab aad u wanaagsan oo laga sameeyay dibedda laakiin aad u kala duwan marka la eego qeexitaannada.
Galaxy S6 Edge wuxuu bilaabaa inuu helo Android 5.1.1
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha leh Galaxy S6 Edge waxay ku helayaan OTA, cusbooneysiinta cusub ee nidaamkooda hawlgalka, Android 5.1.1.
Tag Heuer's Android Wear smartwatch gears ilaa bisha Nofeembar
Tag Heuer wuxuu leeyahay wax walba oo diyaar u ah inuu ku soo bandhigo barnaamijkiisa 'smartwatch' oo leh qiimo sare oo ka hooseeya Android Wear bisha November
Mlais MX, oo ah taleefanka casriga ah ee Shiinaha oo leh 2 GB oo RAM ah iyo batari dhan 4.800 mAh
Mlais waa bilaw yar oo Shiinaha ah oo raba inuu soo galo adduunka taleefanka gacanta waana sababtaas awgeed waxay soo bandhigtay terminal cusub, Mlais MX.
New Galaxy Tab waxaa lagu soo bandhigay Snapdragon 410 iyo S Pen
Samsung waxay soo bandhigtay noocyo cusub oo kala duwan oo ah kiniiniyada Galaxy Tab.
90% Philips Smart TV-yada waxay dhexgalaan Android TV
Markii hore waxay ahayd Nexus Player haddana waxaa noqday Philips oo ku dhawaaqay inuu ku sharadayn doono TV-ga Android TV noocyadiisa telefishannada.
Samsung Galaxy S6 waxay maamushaa RAM aad u badan sida ay adeegsadayaasha qaar qabaan
Sida laga soo xigtay dhowr isticmaale oo ku jira barnaamijka XDA Developers, Samsung Galaxy S6 waxay maamushaa xusuusta RAM aad u badan
Tani waa sida midabka muuqaalka midabka ee 'LG G4' u shaqeeyo
Waxaan ku tuseynaa dhammaan faahfaahinta dareeraha muuqaalka midabka ee LG G4, shidma si fiican u qabta nalka si loogu bixiyo sawirro leh codad dabiici ah.
LG waxay si rasmi ah u soo bandhigeysaa LG G4
Dhowr waxyaalood oo sir ah kadib, maanta ayaa ugu dambayntii loo asteeyey maalintii shirkadda Kuuriyada Koofureed ay soo bandhigto calankeeda cusub, LG G4.
Meizu MX5 ayaa ku daatay akhristaha faraha
Sawirada Meizu MX5 ee soosocda ayaa daadanaya. Terminal laga helo soo saaraha Shiinaha kaas oo yeelan doona akhristaha faraha.
Nexus Player hadda waxaa laga heli karaa Spain
Xaruntii ugu horreysay ee warbaahineed ee Google, Nexus Player, ayaa hadda laga heli karaa Spain iyadoo qiimaheedu yahay € 99.
Google wuxuu ku barayaa sida loo isticmaalo astaamaha ku saabsan Android Wear fiidiyowgan
Google ayaa soo saartay fiidiyow si loo baro sida loo isticmaalo astaamaha Android Wear si loogu beddelo ogeysiisyada
Kani waa sanduuqa LG G4
Saacado gudahood marka la soo bandhigo, sanduuqa ay ku jiri doonaan LG G4 cusub ayaa la sifeeyey, taleefan weyn oo leh tilmaamo lagu xisaabtamayo
Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa saddex sharaf oo cusub 4C
Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa seddex qalab oo cusub mid kasta oo ka mid ah noocyada kala duwan ee khadkeeda cusub ee qalabka Honor 4C toddobaadkan.
ASUS VivoWatch, smartwatch cusub oo leh ismaamul 10 maalmood ah
Dhowr bilood ka hor wararkii ugu horreeyay ayaa soo ifbaxay oo ka hadlay suurtagalnimada in ASUS ay bilaabi doonto smartwatch cusub oo leh ...
LG Watch Urbane horeyba Spain ayey ugu jirtay € 349
Waxaad hadda ka iibsan kartaa saacadda cusub shirkadda Kuuriya, LG Watch Urbane, ee Spain qiimaha € 349.
Hugo Barra wuxuu kala daadiyaa Xiaomi Mi 4i muuqaal ahaan
Hugo Barra, madaxweyne ku xigeenka shirkadda Xiaomi, wuxuu gashan yahay galoofyada gacmahiisa wuxuuna qaatay shaandheeye si uu u kala furfuro Xiaomi Mi 4i
Warshad cusub oo Samsung ah oo loogu talagalay in lagu daboolo qandhada Samsung Galaxy S6 Edge
Qandhada Samsung Galaxy S6 Edge ayaa Samsung ka dhigeysa qorshe ay ku furayso warshad cusub bisha July ee sanadkan.
Kani ma naqshadda taleefanka cusub ee Sony ayaa beddeli doonta Xperia Z4 adduunka intiisa kale?
Sony waxay soo bandhigi doontaa dhamaadka bisha soo socota waxa noqon doona calankeeda cusub oo dhumuc weyn iyo batteri leh
Huawei P8 Lite ayaa ku kacaya wax ka yar € 250
Nooca ugu fudud, Huawei P8 Lite, ee calanka shirkadda Shiinaha, Huawei P8, wuxuu ku kacayaa wax ka yar € 250.
Nexus 5 2015 ma sidan ayuu noqon doonaa?
Google waxay awood u yeelatay inay ka baxsato waxa uu noqonayo terminaalkeeda xiga, ma waxaa jiri doona nooc ka mid ah Nexus 5 2015?
Iibka Nexus ayaa hoos u dhacay sida ku cad xogta Google
Sidii aan horey u saadaalinay, sare u kaca qiimaha Nexus ayaa ka dhigtay inay lumiyaan xiisaha suuqa. Xaqiiqdii, iibkeedu hoos ayuu u dhacay.
LG wuxuu ku sii faanaa shaashadda LG G4
Shirkadda soo saarta Koonfurta Kuuriya ayaa soo saartay laba fiidiyow oo ku saabsan calankeeda soo socota, LG G4.
Lenovo K8 oo leh 4 GB oo RAM ah iyo 4000 mAh baytari
Iyadoo aan weli la ogaan haddii aan si caalami ah u arki doonno, Lenovo K8 oo wata 4G RAM iyo 4000 mAh wuxuu isu beddelay astaamo xiiso leh $ 290
Sidoo kale sawirada ayaa lala qaaday Xiaomi Mi4i
Maanta, soo saaraha Shiinaha ee Xiaomi wuxuu ku soo bandhigay Hindiya, Xiaomi Mi4i, terminal dhexdhexaad ah oo leh astaamo wax badan siiyay in laga hadlo.
Xiaomi Mi4i ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Xiaomi Mi4i waa taleefanka casriga ee cusub ee soo saaraha Shiinaha. Terminal leh shaashad 5 '' inch ah oo leh xallinta FullHD, 2GB RAM, 13MP iyo batari 3120mAh
Microsoft Office Hordhaca waxaa loo heli karaa kiniiniyada Intel / x86
Microsoft Office Horudhac waxay horey u leedahay taageerada Intel x86 kiniiniyada dhismaha.
LG G Watch wuxuu ka dhacayaa taageerada Wi-Fi ee ku saabsan Android Wear
LG G Watch smartwatch ayaa laga reebay taageerada Android Wear 5.1 ee Wi-Fi.
Shaashadda LG G4 ma noqon doonto mid u qallooca sida LG G Flex 2
Calaamadda xigta, LG G4, ayaa la soo bandhigi doonaa 28-ka Abriil in kasta oo wax walba oo ku saabsan terminal-ka la sii daayay, haddana shaashadda qalooca sidaas ma noqon doonto mid qalooca.
Sida loo is waafajiyo laba qalab Android Wear isla waqti isku mid ah
Maanta waxaan kuugu soo bandhigeynaa fiidiyow, habka saxda ah ee loogu xiro ama loo waafajiyo laba aaladood oo loo yaqaan 'Android Wear' oo ku yaal isla bartaha Android
Adobe Lightroom ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 1.1 oo leh taageerada RAW, taageerada kiniinka, iyo inbadan
Adobe Lightroom ee qalabka moobiilku wuxuu helaa nooc cusub oo lagu taageerayo RAW, kaararka micro SD iyo iswaafajinta kiniiniyada
[Download Download] Nooca 1.1 ee loogu talagalay barnaamijka 'Android Wear app' oo wata astaamo badan oo cusub
Nooca 1.1 ee barnaamijka 'Android Wear app' wuxuu ku yimaadaa taageerada qalabyo badan, muuqaal cusub iyo wax ka sii badan
Waxaa lagu dhawaaqay LG G Stylo oo leh shaashad 5,7,, Snapdragon 410 iyo Lollipop
LG wuxuu ku dhawaaqay G Stylo cusub, taleefan leh shaashad 5,7 ", Snapdragon 410 iyo Android 5.0 Lollipop, wuxuuna ku yimid qalin qalin
Sony Xperia Z4 Compact iyo Z4 Ultra ayaa jidka ku soo jira
Iyada oo loo marayo keydka macluumaadka ee shabakadda POSTEL ee laga soo dejiyo Indonesia, xanta Sony Xperia Z4 Compact iyo Sony Xperia Z4 Ultra ayaa soo muuqday.
Sawirro sifeysan oo Sharafta 7, oo leh aaladda sawirka faraha?
Sawirro taxane ah oo ku saabsan Honor 7, oo ah xubin cusub oo ka tirsan qoyska Sharafta, ayaa la sii daayay, taas oo u istaagi doonta dhammaystirkeeda iyo dareeraha sawirka
LG G4 wuxuu ku bilaabayaa dallacsiin gaar ah iyo dammaanad dheeraad ah
LG wuxuu hormuud u ahaa sharadka dalacsiinta gaarka ah. Xaaladdan oo kale, soo saarista LG G4 ma noqonayso mid ka reeban oo waxay ku sharadanayaan dammaanad dheeraad ah.
Sida looga soo kabsado tubbada laba-laabka ah ee LG G2 si shaashadda loo demiyo oo loo daarto
Maanta waxaan ku tusinayaa sida ugu fudud ee aad uga soo kaban karto tubbada laba-laabka ah ee LG G2 ka dib markii aad lumisay markii aad ifineysay Stock rom
LG wuxuu ku muujinayaa wanaagga kamaradda LG G4 muuqaal fiidiyoow ah
Fiidiyowga cusub ee shaashadda ah, LG wuxuu ku muujinayaa awoodda ay ugu deeqi doonto adeegsadaha astaamaha kamaradaha G4
Sony Xperia Z4 waa mid u gaar ah Japan. Nooca caalamiga ah ma naga yaabin doonaa?
Sony Xperia Z4 ee soo saaraha Jabbaan uu shaaciyey waa nooca ku wajahan suuqa Japan. Miyaad noo soo bandhigi doontaa qaab kale bisha Maajo?
Sawirro badan oo ka mid ah ZTE Nubia Z9 oo muujinaya in terminalku si dhib yar u yeelan doono wareegyo
Sawirro cusub oo ah aaladda mustaqbalka iyada oo aan loox lahayn dhinac ayaa soo muuqda, magaceeda, Nubia Z9.
Lollipop-ka Android ee loogu talagalay Xiaomi RedMi Note 4G mahadnaqa CM12
Halkan waxaad ku haysaa faylasha lagama maarmaanka ah iyo sharraxaadda si loo rakibo Android Lollipop ee loogu talagalay Xiaomi RedMi Note 4G mahadnaqa CM12
Warbixinno cayayaan badan ayaa yimaada kiniiniyada Nexus 7 2013
Kiniin la mid ah Nexus 7 2013 ayaa leh dhibaatooyin halis ah iyadoo ay sii kordhayaan dadka isticmaala
Sony wuxuu soo bandhigayaa Xperia Z4: 5,2-inch FHD screen, Snapdragon 810, 3GB RAM iyo kamarad 20.7MP
Shaashad buuxda oo HD ah taas oo macnaheedu yahay inaan wajihi doono taleefan kale oo weyn oo leh Sony Xperia Z4 xagga nolosha batteriga
Falanqaynta sharafta 3C, kuwani waa aragtideena
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa falanqeyn ku saabsan Honor 3C, oo ah heer dhexdhexaad ah oo sharaf ah oo ka yar 150 euro iyo in ka badan astaamo ku filan isticmaale kasta.
Khasaaraha Qualcomm sababtoo ah processor-yada Exynos 7420 ee Galaxy S6 iyo S6 Edge
Samsung waxaa si weyn loogu dhaleeceeyay dhaleeceynta adag ee shirkadda Qualcomm. Laakiin markii la falanqeynayo tirooyinka biilka ee tan waxaan arkeynaa sababta Samsung u dooratay Exynos.